Izindaba Factory - China Izindaba Abakhiqizi & Abaphakeli
I-China Certification &hlola (Iqembu) I-Fujian Co, Ltd.
Phakathi Production Ukuhlolwa
Isitsha Iyalayisha Ukugada
Isevisi yokuhlola ye-Amazon – Ukuhlolwa kwekhwalithi ye-Wreath yokufakelwa
Uhlobo lomkhiqizo: Uhlobo lokuhlola lwe-Wreath Wreath: Ukuhlolwa kwangaphambi kokuthunyelwa / Insiza yokuhlola okungahleliwe Isampula qty: ama-80 ama-pcs wokuhlola ikhwalithi: —Ubuningi — Ukupakisha —Ukusebenza
Izinga Lokuhlolwa Kwekhwalithi lamalambu nezibani
Amalambu nezibani ngaphezu kwendima eyisisekelo yokukhanyisa, okubaluleke kakhulu ukuthi ikhandlela lesidlo elifanelekile lingaba yisimo esihle kakhulu se-foil somoya ofudumele womndeni, ubuhle obulula kanye ne-chandelier ekhanyayo nakho kungenza abantu bavule imizwa enethezekile, ukuze impilo igcwale isikhalazo esingokomzwelo. Kanjani ...
Dala ukuthunyelwa nge-Send to Amazon
I-Fujian CCIC Testing Co, Ltd. uphumelele ngempumelelo ukubuyekezwa kwe-CNAS
Kusuka ngomhla ka-16 kuya ku-17 Januwari, 2021, iChina National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) yaqoka ochwepheshe abayi-4 bokubukeza njengethimba lokubuyekeza, futhi yenza ukubuyekezwa kokugunyazwa kwe-ejensi yokuhlola iFujian CCIC Testing Co., Ltd (CCIC-FCT) . Ithimba lokubuyekeza lenze i-compreh ...
Knowledge Ulwazi lwe-QC insp Ukuhlolwa kwekhwalithi ye-Garment
I-AQL isifinyezo se-A average Quality Level, iyipharamitha yokuhlola kunokujwayelekile. Isisekelo sokuhlola: usayizi we-batch, izinga lokuhlola, usayizi wesampula, i-AQL inezici zokwamukelwa. Ngokuhlolwa kwekhwalithi yezambatho, sivame ngokuya ngezinga lokuhlola elijwayelekile, nesiphene ...
Bheka amaphuzu wokuhlola ikhwalithi yefenisha yangaphandle
Imininingwane eningilizayo yenqubo yokuhlola yeCCIC
Inqubo Okujwayelekile Yokuhlola Amathoyizi
ngu admin ngo 20-07-21
Ukuhlola ikhwalithi yamathoyizi kuyinto evamile yokuhlola into, futhi kunezinhlobo eziningi zamathoyizi ezingane, ezinjengamathoyizi epulasitiki, amathoyizi e-plush, amathoyizi kagesi, njll. lawula ikhwalithi yemikhiqizo ngokuqinile. Lesi sihloko...
Knowledge Ulwazi lwe-QC Insp Ukuhlolwa Kwama-Backpacks Women
ngu admin ku 20-06-16
Isaziso Sokulungiswa Komsebenzi
ngu admin ku 20-02-07
Kuthintwe ubhubhane lwenoveli i-coronavirus pneumonia, Uhulumeni wesifundazwe saseFujian uvula izimpendulo eziphuthumayo zomphakathi ezisezingeni lokuqala. I-WHO imemezele ukuthi yakha isimo esiphuthumayo sezempilo yomphakathi esiphathelene nokukhathalela amazwe omhlaba, futhi namabhizinisi amaningi okuhweba angaphandle athintekile emisebenzini ...
Ukulwa ne-Novel Coronavirus, i-CCIC iyasebenza！
ngu admin ku 20-01-27
Kuvele i-coronavirus yenoveli eChina. Luhlobo lwegciwane elihlaselayo eliqhamuka ezilwaneni futhi lingadluliselwa kusuka kumuntu liye komunye. Lapho ubhekene ne-coronavirus engazelelwe, iChina ithathe uchungechunge lwezinyathelo ezinamandla ukuqukethe ukusakazwa kwe-coronavirus yenoveli. I-China foll ...
ngu admin ngo 19-10-25
I-RoHS Compliance (RoHS) iqoqo lezimiso ze-EU ezisebenzisa i-EU Directive 2002/95 evimba ukusetshenziswa kwezinto eziyingozi kumishini kagesi neye-elekthronikhi. Lokhu kuvimbela kokuyalelwa kubekwe emakethe ye-EU, noma yimuphi umkhiqizo onengxenye kagesi / ye-elekthronikhi equkethe ngaphezu kwe-th ...
Amadivayisi: Floor 20, wama-75, i-East Jiangbin Avenue, Mawei District, Fuzhou, Fujian, China